नेकपा विवाद नटुंग्याई निर्वाचन कसरी हुन्छ ? « Janata Samachar
काठमाडौं। विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै समूहले पार्टीको आधिकारिकताको दावी गरिरहेका छन् । तर यसबारे निर्णय गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग भने नेकपाको आधिकारिकताको विवाद निरुपण गर्नेभन्दा निर्वाचनको तयारी गर्न थालेको छ ।
मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दल विभाजन भएको र त्यसपछि उत्पन्न विवादको समाधान नगरी आयोगले नयाँ निर्वाचनको तयारी गर्न थालेपछि आयोगको उल्टो सक्रियतामाथि टिप्पणी हुन थालेको छ । नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंगो नलगाई कसरी निर्वाचन हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्न थालिएको हो ।
नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले गत माघ २० गते नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको थियो। तर निर्वाचन आयोगले सरसर्ती त्यसबारे अध्ययन गरे पनि विवाद निरुपण गर्न भने कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
यस्तो अवस्थामा माथि उल्लेखित परिस्थिति रहेकोले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुनेमा व्यापक आशंका छ । सबैतिरबाट नयाँ निर्वाचन कसरी हुनसक्छ प्रश्न उठेको छ। यसैबीच आइतबार निर्वाचन आचारसंहिताबारे निर्वाचन आयोगले बोलाएको छलफलमा नेकपा दाहाल – नेपाल पक्षका नेता लीलामणि पोखरेलले पनि नेकपा विवाद निरुपण नभइ चुनाव कसरी हुनसक्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।
निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति दलहरुको दर्ता र आयोगमा दलहरुको बारेमा विवाद आयो भने त्यसको निरुपण गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । त्यसै गरी निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने प्रमाणसहित आधिकारिकता दिने पनि आयोगलाई जिम्मेवारी छ । तर आजको विवादित अवस्थामा आयोगले दलसम्बन्धी विवाद मैले निरुपण गर्न सकिनँ र मैले गरिनँ भन्न नमिल्ने नेता पोखरेलको भनाइ छ।
दाहाल–नेपाल समूहले उठाइरहेको विषयमा आयोग र त्यसका पदाधिकारी भने मौन देखिने गरेका छन्। तर पछिल्लो समय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालगायतका आयुक्तहरुले नेकपाको आधिकारिकता विवाद ऐन अनुसार आधिकारिकता दाबी भएपछि औपचारिक रुपमा कानूनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको बताउन थालेका छन् ।